Kungani Ungabhalisa Futhi Uthole Inombolo Ye-DUNS | Martech Zone
Kungani Ungabhalisa Futhi Uthole Inombolo Ye-DUNS
ULwesibili, April 13, 2010 NgoMgqibelo, Disemba 23, 2017 Douglas Karr
Uma ungathanda ukuqinisekisa ukuthi ibhizinisi lakho elincane lingathola ukunakwa okuthile namathuba enkontileka nohulumeni namabhizinisi amakhulu, kufanele bhalisela inombolo ye-DUNS kwaDun & Bradstreet. Ngokwesayithi:
Inombolo ye-DUNS iyizinga lemboni lokugcina umkhondo wamabhizinisi omhlaba futhi kunconyiwe futhi / noma kudingwa izinhlangano ezingaphezu kwama-50 zomhlaba, izimboni kanye nezohwebo, kubandakanya i-United Nations, i-US Federal Government, uHulumeni wase-Australia kanye ne-European Commission.
Inombolo yakho ye-DUNS akuyona nje imfuneko yamathuba athile, futhi iyisihlonzi sebhizinisi lakho njengenombolo yokuphepha kwezenhlalo (e-US) eyokubika kwakho isikweletu. Kuzovumela amabhizinisi amakhulu, ama-ejensi abolekisa, kanye nohulumeni wesifundazwe ukuthi ahlole isikweletu ebhizinisini lakho ukuqinisekisa ukuthi bafisa ukwenza ibhizinisi nawe noma cha. Kungaba yihlazo ukwenza konke ukumaketha okudingekayo ukuthuthukisa ibhizinisi lakho - kodwa ulahlekelwe yisivumelwano ngoba ibhizinisi lakho alibhalisiwe futhi litholakala ku-database ye-DNB!
UDun noBradstreet bagcina imininingwane yamabhizinisi angaphezu kwezigidi eziyi-140 emhlabeni wonke anamarekhodi ezezimali angaphezu kwezigidi ezingama-200 aqoshwa minyaka yonke. Kubaluleke kakhulu ukugcina umkhondo wesilinganiso sebhizinisi lakho nedumela lakho ngeDun naseBradstreet njengoba kulandelwa isilinganiso sakho sesikweletu.
Ungathola izinsizakusebenza zebhizinisi ezingeziwe (i-US) nolwazi lokuqala ibhizinisi lakho ku Ibhizinisi Elincane Likahulumeni wase-United States indawo.
Tags: izibhamudnbi-dun ne-bradstreetizibhamuinombolo ebanjiwe
Yenza lula ibhizinisi lakho ngezinhlelo zokusebenza ze-Google
Idizayinelwe Ukukhombisa Okuthile Okujwayelekile